उपेन्द्र–बाबुरामद्वारा नौ जना नेता निष्काशित, लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदसँग स्पष्टीकरण माग
काठमाडौं, ३ असार । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा मन्त्री भएका नौ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ ।
सर्लाही, ३ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रोक लगाएको मल वितरण पुनः फुकुवा गरेको छ । प्रशासनले मल वितरणमा लगाएको रोक एक साता नपुग्दै फुकुवा गरेको हो । कोटाभन्दा बढी मल वितरण भएको भन्दै रोक लगाएको प्रशासनले उखु तथा मकै किसानको गुनासोपछि वितरण फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो ।
पर्साका निजी अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुरु हुँदै
पर्सा, ३ असार । पर्सामा कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले ओपीडी सेवा सुरु गर्न लागेका छन् ।
पर्सा, ३ असार । पर्साको वीरगञ्जबाट प्रहरीले ६५ किलोग्राम लागुऔषध गाँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पर्यटनमन्त्री अरगरियालाई १०१ किलोको मालाले स्वागत
जनकपुरधाम, ३ असार । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई बुधबार धनुषामा १०१ किलोको मालाले स्वागत गरिएको छ । मन्त्री यादवलाई जनकपुरधाममा नेता तथा कार्यकर्ताले १०१ किलोको मालाले स्वागत गरेका हुन् ।
५४ क्युफिट काठ बरामद
जनकपुरधाम, ३ असार । महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको दुर्गम इलाकाको वन क्षेत्रबाट अवैध सालको काठ तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ ।
महोत्तरीमा डाकाले सुन पसल लुटे
महोत्तरी, ३ असार । महोत्तरीमा गोली प्रहार गरी डाकाहरुको समूहले लाखौंको लुटपाट गरि फरार भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले दिएको जानकारी अनुसार सम्सी गाउँपालिका १ पर्सा बजारमा गएराति डाकाहरुको समूहले राजीव ज्वेलरी सुन चाँदी पसलमा ८–१० जनाको संख्यामा रहेका हातहतियार सहितका डाकाहरुले लुटपाट गरेका छन् ।
गाउँपालिका कार्यालय सहयोगीद्वारा फिरौती माग
वीरगञ्ज, ३ असार । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसित १५ लाख फिरौती माग गर्ने एक युवकलाई बारा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा बाराको सुवर्ण गाउँपालिका–४ हर्दिया टोलका २८ वर्षीय मुकेशप्रसाद यादव छन् ।
बारामा एक युवकको हत्या
बारा, ३ असार । बारामा एक युवकको शव फेला परेको छ । बाराको बिश्रामपुर गाउँपालिका–१ बरैनिया बजारनजिकै युवकको शव फेला परेको हो ।
साङ्लोले बाँधिएका व्यक्तिको उद्धार
वीरगन्ज, ३ असार । विगत २ महिनादेखि फलामको साङ्लोले बाँधिएर राखिएका एक ब्यक्तिको उद्धार गरिएको छ । पर्साको सदरमुकाम वीरगञ्ज महानगरपालिका– १७ अलौ टोलमा बाँधेर राखिएको अवस्थामा ४३ बर्षिय हृदय नारायणसाह तुराहाको बुधबार उद्धार गरिएको हो ।
रौतहटमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्दै
रौतहट, ३ असार । रौतहटमा पछिल्लो केही दिनदेखि कोरोना संक्रमित तथा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको दर घट्दै गएको छ । लगातारको निषेधाज्ञा र सतर्कताको कारण संक्रमण तथा मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आएको हो ।
खोलाको बाढीले बगाउँदा एक बालकको ज्यान गयो
राजविराज, ३ असार । सप्तरीमा भुतही बलान खोलाको बाढीले बगाउँदा एक बालकको ज्यान गएको छ । सप्तरी बलान बिहुल गाउँपालिका–४ बेल्ही बस्ने किसुनदेव भण्डारीका १३ वर्षीय छोरा सन्तोष भण्डारीको मृत्यु भएको हो।
सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश सडक अवरुद्ध
सर्लाही, ३ असार । बर्खा लागेसँगै सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएका छन् । केही दिन यता पानी पर्ने क्रम बढेसँगै खोलाको बगर र चुरे पाखाका गोरेटो बाटोहरू अवरुद्ध भएका हुन् ।
महोत्तरीमा कमिसनका लागि कुटाकट
महोत्तरी, ३ असार । सिमेन्ट माग्ने विषयमा विवाद हुँदा कुटाकुट भएको छ । कुटाकुटमा दुई जना घाइते भएका छन् । महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका वडा न. ५ पोखरभिण्डामा भइरहेको विकास निर्माणका कार्यमा कमिसनको सट्टा सिमेन्टको बोरा माग्दा विवाद भएको थियो ।
पर्यटनमन्त्री अरगरिया र प्रदेश प्रमुख डा.अहिराजबीच भेटवार्ता
जनकपुरधाम, ३ असार । गृहजिल्ला धनुषा भ्रमणको क्रममा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया र प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराजबीच भेटवार्ता भएको छ ।
जनकपुरधाममा कोभिड विशेष अस्पतालको उद्घाटन, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अन्य सेवाहरु छिट्टै शुरु हुने
जनकपुरधाम, ३ असार । प्रदेश २ सरकारले अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा एक सय सैय्याको विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कार्यकारिणी सदस्यमा मनोनित नामावली बुझाउन ठाकुर आफैं पुगे निर्वाचन आयोग
काठमाडौं, २ असार । कार्यकारिणी समितिमा बहुमत जुटाउन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफू निकट १७ जना व्यक्तिलाई कार्यकारिणी सदस्य मनोनित गरी यस सम्बन्धी नामावली अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाएका छन् ।
उपेन्द्रले बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सहभागी नहुन महन्थको आग्रह
काठमाडौं, २ असार । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोलाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सहभागी नहुन प्रथम वरियताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख डा.अहिराजद्वारा गढीमाई मन्दिर क्षेत्रमा वृक्षरोपण
रौतहट, २ असार । प्रदेश नं. २ का प्रमुख डा.राजेश अहिराजले रौतहटस्थित गढीमाई मन्दिर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख डा.अहिराजद्वारा प्रादेशिक अस्पताल निरीक्षण
जनकपुरधाम, २ असार । प्रदेश २ का प्रमुख डा.राजेश अहिराजले जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् ।
जनकपुरधाम, २ असार । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले बुधबार जनकपुर धाममा अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गरेका छन् ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि बाँकेको जनजीवन सहज बन्दै
नेपालगञ्ज, २ असार । बाँकेमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि यहाँको दैनिक जनजीवन सहज बन्दै गएको छ । निषेधाज्ञाको शुरुआती चरणमा औषधि, किराना, खाद्यान्न तथा तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुका पसलमात्र खोल्न दिइएकामा गत एक सातादेखि सबैखाले पसल खोल्न अनुमति दिइएको छ ।
रौतहटका तीन स्थानीय तह संक्रमण मुक्त
रौतहट, २ असार । रौतहटका तीन स्थानीय तह संक्रमणमुक्त भएका छन् । रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये गरुडा, मौलापुर र माधवनारायण नगरपालिका संक्रमणमुक्त भएका हुन् ।
बाँकेमा पहिलोपटक चैते धान
बाँके, २ असार । बाँकेका किसान पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन् । बर्खे धानभन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर बृद्धि भएको किसानहरुले अनुमान गरेका छन् । उत्पादन देखेर गाँउका अन्य किसान पनि अकार्षित भएका छन् ।
चोरीपैठारीको फलामसहित दुई जना पक्राउ
कपिलवस्तु, १ असार । कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका २ स्थित चेकपोईन्टबाट सशस्त्र प्रहरीले करीव २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारीको फलामसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।